Shiinaha Sanka Sanka, Jumlada Jumlada, Soosaarayaasha Mubaarka Muuska dhalaalaya Kulul Soosaarayaasha Iyo CE - Tiknoolajiyada Daaliska (Zhejiang) Co., Ltd.
Tiknoolajiyada Purking (Zhejiang) Co., Ltd.
Shirkadda waxaa la aasaasay 2014. Xarunta iibka ee shirkaddu waxay ku taal Magaalada Yiwu, Gobolka Zhejiang. Xarunta wax soo saarka iyo isku imaatinka waxay ku taalaa Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong. Shirkad caan ah oo ku dhexjirta ganacsiga carwada joogtada ah iyo bandhiga. Shirkaddu waxay leedahay in kabadan 1000 mitir murabac oo dhismayaal warshad ah, Waa shirkad mashiinka miiraha kulkulleeyaha kulul ee mideeya cilmi baarista, horumarinta, suuqgeynta, tababarka shaqaalaha iyo adeegga iibka kadib.
Saddex waxyaalood oo badanaa loo isticmaalo siligga sanka
Kordhinta xogta faafa ee adduunka, isticmaalka waji-furka ayaa sii kordhaya; taasoo keentay sahay adag. Si loo xaliyo dhibaatada baahida loo qabo maaskarada, shirkado badan ayaa sidoo kale bilaabay inay soo saaraan maaskarada, siligga sanka oo ah maaskaro lagu dhejiyo ma aha mid laga reebay.
Farqiga u dhexeeya silig hal-laba-gees ah iyo laba-gees
Maaskaradu waa mid aan haatan laga maarmi karin, sidaa darteed siligga buundada sanka ayaa ah diiradda maaskaro Waa maxay farqiga u dhexeeya siligga buundada sanka hal iyo laba gees?
Maxay yihiin noocyada siligga buundada sanka?
Cudurka 'COVID-19' ee dillaacay sannadka 2020 wuxuu waji-ka-waji u noqday daruuri nolosha.
Sanadka 2020, markii COVID-19 wax ku dhufto, baahida dadka ee wajiyadu aad ayey u korortay, Waxaa jira noocyo badan oo buundada sanka ah ee waaskaska ah. Kuwaas ka mid ahï¼Œ Maxay yihiin faa'iidooyinka 100% siligga sanka ee caagga ah caag ah?